Aqara Hub oo ka socota Xiaomi Mi Home - qaabeynta iyo tusaha HomeKit - SmartMe
Aqara Hub oo ka socota hagaha Xiaomi - wax kasta oo ay tahay inaad ogaato inaad uga dhigto mid si hagaagsan u shaqeeya!
Aqara Hub waa wadnaha gurigaaga caqliga badan haddii ay ku saleysan tahay alaabada Aqara ama Xiaomi. Laakiin waxaa laga yaabaa inaysan ahayn wax kasta oo ku jira qaabeynta aaladda sidii waalan, inkasta oo aad raacday tilmaamaha? Haddii sababtaas darteed aad halkan u joogto oo aad wax dhibaato ah ku qabtid dalabka, markaa hoos ayaan ku sharxi doonaa sida looga dhigo qalabku inuu si qurux badan ugu shaqeeyo. Oo haddii qaabeynta koowaad ay kaa horreyso, way ka sii fiicantahay! Walbahaarka yari, ninka faraxsan ayaa ah ????
Haddii aad xiiseyneyso waxa Aqara Hub yahay, waxaan kuu tixraacayaa dib u eegisteyda, taas oo aan si faahfaahsan ugu sharraxi doono waaya aragnimadayda ku saabsan adeegsiga aaladda - Link. Qoraalkan, waxaan diiradda saari doonaa qaab-u-dejinta qaabeynta Aqara Hub. Joogitaanka meelaha dhibaatada noqon kara. Cutubyada qaar ayaa sidoo kale loo qaybin doonaa IOS (iPhone) iyo Android (Samsung, Xiaomi, Huawei, LG, Sony iwm). Sababtoo ah qaar ka mid ah howlaha aan ku qabanno goobaha taleefanka.
Sida loo bilaabo - Aqara Hub qaabeynta?
Waayahay, maxaan u baahan nahay inaan ku bilowno? Waxaan u baahanahay inaan gacanta ku hayno Aqara Hub. Haddii aad haysatid nooca yurubiyanka ah, taasi waa ku filan tahay, laakiin hadaad haysatid koobi ka socda Shiinaha, waxaad sidoo kale ubaahantahay adabtarada qeybta Polish-ka. Tan darteed waa inaad haysataa dalabka Mi Home. Maxaad ugu dooratay Mi Home halkii aad ka aqri lahayd Aqara Home? Sababta oo ah Mi Home waxay bixisaa isku mid sida Aqara App oo lagu daro dhammaan Xiaomi, Roborock iyo dhowr waxyaabood oo kale oo filim ah.
Intaas oo dhan, waxaan ku bilaabi karnaa annaga oo raadineyna meel loo dejiyo Gateway (Aqara Hub). Waa inuu ku yaal bartamaha guriga ama aqalkiisa. Isaga ayaa leh in aaladaha oo dhami ay wada xiri doonaan, marka haddii ay suurta gal tahay, waxaa u qalmaan mid kasta oo ka mid ah inuu dhow ahaado.
Ku darista dalabka
Ka dib markii la rakibo dalabka, waxaan ku dari karnaa qalabka ugu horreeya.
Inta aynaan taas sameynin, si kastaba ha noqotee, su'aasha muhiimka ah ayaa soo baxday: xagee ka soo iibsatay Aqara Hub? Haddii aad ka timid Shiinaha, u dejiso gobolka dhul ballaaran oo Shiinaha ah, iyo haddii Yurub dhexdeeda ah, ka dibna Yurub u gudub.
Waa hagaag, hadda waxaan u sii wadi karnaa ku darista aaladda iyo qaabeynta. Waxaan haynaa seddex qaab oo tan loo sameeyo:
Haddii aaladda ku shaqeyso Bluetooth, ka dibna dhagsii aaladda raadinta aaladda raadinta isla markaana arjiga lafteeda ayaa heli doona.
Waxaan sidoo kale geli karnaa magaca aaladda.
Ka dib markaad bilowdo ku darista qalabka, shaashadda soo socota ayaa horteenna imaan doonta, iyagoo kuu sheegaysa waxa aad samaynayso marka hore: ku hay badhanka dusha sare 10 ilbiriqsi (hay ilaa iyo inta aad ubaahantahay) ilaa iftiinka jaalaha ah ee ikhtiyaarkaagu bilaabmayo dhalaalaya, i.e. loo yaqaan Xiriirka aaladda. Mar dambe ayaanu calaameyneynaa Howlgalka ayaa la xaqiijiyay oo aad doorataa guriga loo yaqaan 'Gatewayway' ee uu ku jiri doono. Tani waa qaabeynta aasaasiga ah ee Aqara Xiaomi.
Halkaan, labo hawlo muhiim ah oo laxiriira batoonkaan waa in lagu xuso:
Ku haynta wax ka badan sekennada 10 ilbiriqsi waxay keentaa in qalabka dib loo bilaabo. Haddii aan si kadis ah kuugu xero, tani waa sida ugu fiican ee dib loo bilaabo. Sharciga aasaasiga ah ee dhammaan qalabka kumbuyuutarka sidoo kale halkan ayaa lagu dabaqi karaa.
Guji deg deg ah ee badhanka muddo ka badan 10 ilbiriqsiyo ayaa dib kuugu soo celineysa dejimaha warshadaha. Tani waxay ka dhigan tahay in Aqara Hub illoobi doono dhammaan aaladaha ku xiran waana inaad dib u bilowdaa wax walba mar labaad. Tan waxaa la yiraahdaa ugu dambeystii markii Hub gebi ahaanba aan laga jawaabin.
Tallaabada xigta, dalabka wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku darto aaladdaada HomeKit. Sababtaas awgeed, baaragaraafka soo socda waxaa loogu talagalay oo keliya dadka isticmaala iPhone. Haddii aaladdaadu ka shaqeyso Android, waad ka gudbi kartaa sadarkaan.
HomeKit gudaha Xiaomi Aqara - sida ay u shaqeyso
Aqara Hub waxay la jaan qaadi kartaa Apple HomeKit, oo runtii macluumaad weyn leh. Awoodda lagu dhejin karo barnaamijka Home-ga ayaa soo muuqda isla marka la isweydaarsado. Mar labaad, waxaan haynaa dhowr ikhtiyaar oo ah sida aan tan ku sameyn karno.
Waxaan soo qaadnaa sawir Sawir HomeKit, oo saran sanduuqa iyo aaladda. Way ka nabad roon tahay inaad ka soo saar alaabada ku dhejiso qalabka.
Haddii uu jiro ikhtiyaarka isku xirka wireless, ka dibna kaliya geli iPhone aaladda (ma jiro ikhtiyaar noocaas ah oo loogu talagalay Aqara Hub).
click Anigu ma haysto ama ma iskaan baari karo koodhkagoor dambe Gali lambarka... oo gacanta ku gal. Talo wanaagsan: haddii dhibaato ka jirto HomeKit, markaa isticmaal habkan.
Marxaladdan kadib, daaqadda loogu talagalay ku darista aaladda shabakadda ayaa soo bixi doona. Dabcan waan bixinnaa Ok. Waxaan taas uga sii gudbi karnaa tan.
Waa kuwan qaar ka mid ah talooyin wanaagsan oo dheeraad ah haddii aad dhibaato la kulanto:
Hubso inaysan jirin jilayaal khaas ah oo ku jira furaha sirta ah ama magaca.
Aqara Hub wuxuu ku shaqeeyaa kaliya kooxda 2,4 GHz, ee maaha 5 GHz.
Haddii ay wali jiraan dhibaatooyin ka jira shabakadda guriga, ka dibna fiiri qaybta ugu dambeysa ee hagida, waxaan ku daray halkaas sida loo xalliyo dhibaatada tallaabada shabakadda iyada oo la adeegsanayo DNS.
Daqiiqado isweydaarsiga kadib, waxaan u gudbi doonnaa Codsiga Guriga. Halkaas, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan beddelino labada magac ee qaylo-dhaanta iyo nalka, oo aan ku darno qolka la xushay.
Halkaan, Aqara Hub ayaa horeyba si buuxda ula midoobay Apple HomeKit.
Waxaan dib ugu laabaneynaa dalabkii Xiaomi Home, tab HomeKit oo guji qalabka si aad halkan ugu darto sidoo kale. Shaashadda isku xidhka ayaa soo muuqan doonta.
Xilli dambe, aaladda waxaan ugu dari karnaa qolka waxaanan u bixinay magac (waxaan u sameyneynaa si gooni ah barnaamijyada Home and Xiaomi Home). Dhamaadka waxaan dooranaa inaan rabno inaan qalabkeena la wadaagno qof (tusaale ahaan, xubnaha reerka).
Ugu dambeyntii, dhagsii qalabka, daaqada bilowga ayaa soo muuqaneysa (dhowr ilbiriqsi) oo ogolaansho u leh ka shaqeynta xogta. Iyo voila! Aqara Hub si buuxda ayuu u shaqeeyaa!
Hadaad rabto inaad isticmaasho awooda buuxda ee Aqara Hub oo aad ka yaabantahay sida loo otomaatig u sameeyo, waxaan kugu casuumay hageyaasheena iswada. Oo hadaad raadinayso dib u eegis qalabka, waxaan kugu casuumayaa inaad dib u eegis ku sameyso xalka Aqara oo dhan. Sidaad arki karto, Shiinaha hadda waa waddan bixiya tikniyoolajiyad tayo sare leh oo tayo sare leh. Tani micnaheedu maahan in si kastaba ha noqotee, in waxyaabaha Xiaomi ay yihiin kuwo hagaagsan.
Dhibaatada shabakada iyo Aqara Hub
Ugu dambeyntiina, baaragaraafka loo ballanqaaday ee ku saabsan dhibaatooyinka shabakadda. Mid ka mid ah dhibaatooyinka la xiriira iskuxirka Aqara Hub waa DNS. Qodobbada hore waa kuwo aad muhiim u ah, taas oo ah magaca iyo lambarka sirta ah oo aan laheyn jilayaal khaas ah iyo bandiga 2,4 GHz. Si kastaba ha noqotee, haddii tani aysan ku filnayn, markaa waxaad isku dayi kartaa xalka hoose. Tan, waxaad awood u yeelan kartaa inaad ku xalliso arrintaan wax laga xishoodo.
Loogu talagalay IOS:
Waxaad galaysaa dejinta taleefanka.
Waad shid Wi-Fi.
Waxaad guji calaamadda "Oo" shabakadda gurigaaga ku taal.
clique Isku hago DNS.
Waxaad u beddeleysaa gacanta.
Waxaad u beddeleysaa DNS si 0.0.0.0 .
Hadda waa inay shaqeysaa, iyo markii ay iskuxirto, ku noqo ikhtiyaarkan oo mar labaad dooro si toos ah.
Loogu talagalay Android:
Waxaad galaysaa dejinta taleefanka
Waxaad shidaysaa shabakadda gurigaaga ku jirta.
Mar labaad ayaad gujisaa shabakaddan.
Hoos ayaad u dhaadhacdaa oo guji Advanced.
W Dejinta IP waxaad ka beddelaysaa DHCP oo taagan.
Waxaad u beddeleysaa DNS 1 illaa 0.0.0.0 ..
Hadda waa inay shaqeysaa, mar unna isku xidhaa, ka dib ku noqo xulashadan oo mar labaad dooro DHCP.
Ka iibso Aqara Hub at Gearbest
Apple HomeKit, dib u eegista, Hoyga Xiaomi
Aqara Socket - Dib u eegida Zigbee Smart Smart Socket oo ka socota HomeKit
Aqar, socket, soket smart
Ama waxaa laga yaabaa in godka Ziggbee ee leh HomeKit? Maanta waxaan tijaabineynaa Aqara Nest!
Nalalka la qabsiga ah ee loo soo bandhigay alaabada Aqara
Nalalka la qabsiga ayaa si tartiib tartiib ah ay u soo saarayaan soo saarayaasha qalabka 'HomeKit accessories accessories'. Bilihii la soo dhaafay, tallaabadaas oo kale waxaa lagu qaaday Eve Light Strip iyo Philips Hue. Hada kooxda waxaa weyneynaya alaabada Aqara. Aqara leh ...
Drony, Guriga Google, Kaaliyaha Hoyga, News, jabnaanta, Home smart, Naag caqli badan, casriga ah, Hoyga Xiaomi
Maalinta dhalashada Aliexpress ee Maarso 29.03 - Abriil 3.04.2021, XNUMX! Cusboonaysiinta - Xeerarka cusub!
70amai, AirDots 2, aliexpress, amazfit, ANlan, Aqar, Caqara cube, AriDots Pro 2, Azdent, aasaas, Bobot, Ender 3 Pro, Weligiis, malab, sharaf, huawei, iLife, dhexgal, jimmy, KiCA, liitroux, Livolo, duugista, MatePad, mantag 5, sanduuqa m, Mi Xcooter, Miji, moes, uumi, oclean, nadiifiye, poco, dallacsiinta, qcy, redmi, Dib u fur, roborock, nadiifiye faakiyuum, Sinocare, smartmi, xanniban, SOOCAS, Teclast, tronmart, Tundeal, tuya, Usee, viomi, xiaomi, yeedi, yi
Waqti qiimo dhimis kale maxaa yeelay waxaan u dabaaldegeynaa dhalashada 11aad ee Aliexpress! Qiima dhimista AliExpress macnaheedu waa dalabyo aad u wanaagsan adiga! Haddii aadan aqoon ama aad jeceshahay inaad naftaada xusuusiso sida loo sameeyo xitaa wax ka iibsiga jaban ee Aliexpress, fadlan ...
Aqara T1 - Dib u eegida gudbinta Aqara si loogu rakibo N
Aqara T1 waa beddel suuqa Yurub ee si fiican u la jaan qaadi doona rakibidda kanaal dhexdhexaad ah!
Aqara H100 - qufulka cusub ee caqliga badan
Aqar, aqara h100, Homekit, quful smart
Aqara wuxuu sii wadaa istiraatiijiyadda ballaarinta dalabkeeda iyadoo la adeegsanayo alaab guri oo casri ah. Qalabkan waxaa lagu soo bandhigayaa si joogto ah oo cajiib ah, sida lagu muujiyey hordhacii ugu dambeeyay ee ugu dambeeyay ee H100 smart quful leh kamarad fiidiyoow ah. Badeecada hada ...
Apple HomeKit, Casharrada, Hoyga Xiaomi
Isbarbardhiga Sonoff Mini vs Aqara T1 - 3 daqiiqo gudahood!
Aqar, Aqara t1, tiirsanaayeen, xanniban, sonoff mini
Maxaa kale oo ka badan HomeKit? Sonoff Mini ama Aqara T1? Keebaa kujira WiFi-ka iyo keebaa saaran ZigBee? Dhammaan su'aalaha waxaa looga jawaabey saddex daqiiqo gudahood!
Apple HomeKit, dib u eegista, Home smart, Hoyga Xiaomi
Aqara T1 oo aan dhexdhexaad ahayn - Dib-u-eegista gudbinta ee guri kasta
Aqar, Aqara t1, oo aan dhexdhexaad ahayn, dhexdhexaad ah, tiirsanaayeen
Guri dabaq ah oo ku yaal dabaqyo waaweyn. Thanks to Aqara T1, ma jiro caqli dhexdhexaad ah oo dhici doona! Sidan ayaan u qeexi karnaa warkan oo kooban!
Apple HomeKit, Guriga Google, dib u eegista, Home smart, Hoyga Xiaomi
Aqara T1 oo aan dhexdhexaad ahayn - Guddiga weyn sidoo kale caqli buu yeelan karaa!
Aqar, Aqara t1, Aqara T1 oo aan dhexdhexaad ahayn
Waxaan ku noolaa taariikh weyn noloshayda oo dhan. Markaa markii hore cawl iyo maanta dabaqyo dabaqyo ah. Kaliya markii aan u guuray dhismaha cusub ayaan bilaabay inaan ka fekero guri caqli badan, laakiin xitaa halkan waa qarow la'aanta la'aanta ...
Aqara T1 oo leh dhexdhexaad - dib u eegis ku saabsan gudbinta cusub ee Aqara
Aqar, Aqara t1, tiirsanaayeen
Relay-kii iigu horreeyay ee sanduuqa ku jiray wuxuu ahaa Relay Aqara. Isaga ayaa ii oggolaaday in aan xakameeyo indhoolayaasha. Si kastaba ha noqotee, ma aysan aheyn la'aan cilladaheeda. Aqara ayaa markaa u soo saaray suuqa Shiinaha, taas oo ka dhalatay ...
Aqara ayaa ka jaban 15% kaliya illaa dhammaadka Febraayo!
25 Febraayo 2021
Haddii aad isweydiineysay goorta dhiirrigelintayada rasmiga ah ee 'Aqara' ay sii socon doonto, waxaan ku degdegeynaa inaan kugu wargelinno inay tahay oo keliya dhammaadka Febraayo! 15% - tani waa inta aad hada ka faa'iidi karto adoo gujinaya calamadeena iyo ...
Iftiinka cusub ee Aqara H1 wuxuu shidaa wadada
Aqar, Aqara guriga, nalka shidida
Dhawaan, furayaasha cusub ee Aqara H1 ayaa ka soo muuqan doona suuqa. Kuwani waxay noqon doonaan beddelayaal Aqara ah oo loogu talagalay suuqgeena Yurub! Hoos waxaad ka heli kartaa sawirradii ugu horreeyay ee aan helnay! :) Halkii laga tijaabin lahaa naqshad gebi ahaanba cusub, furayaasha EU-da waa ...